MODA | Article Detail | မိန်းကလေးအများစုမှာရှိတဲ့ ဆတ်ဆတ်ထိမခံတဲ့အရာတွေက ဘာတွေလဲ
This is our home, Not just yours
လူသားတွေမေ့နေတာတစ်ခုက ကမ္ဘာမြေကြီးဆိုတာကလည်း ကိုယ်နေထိုင်နေတဲ့ အိမ်ကြီးတစ်လုံးဖြစ်တယ် ဆိုတာပါ
ကိုယ်နေတဲ့ ကိုယ့်အိမ်လေး သန့်ရှင်းဖို့အတွက်နဲ့ အမှိုက်တွေကို ထုတ်ပိုးပြီး အိမ်အပြင်ကို စွန့်ပစ်ကြတယ်။
လူသားတွေမေ့နေတာတစ်ခုက ကမ္ဘာမြေကြီးဆိုတာကလည်း ကိုယ်နေထိုင်နေတဲ့ အိမ်ကြီးတစ်လုံးဖြစ်တယ် ဆိုတာပါပဲ။
ကိုယ်နေထိုင်တဲ့ ကိုယ့်အိမ်ထဲက အမှိုက်ကို စနစ်တကျ စွန့်ပစ်တတ်ကြပေမယ့် ကိုယ်အမှီသဟဲပြုနေတဲ့ ကမ္ဘာကြီးပေါ်က အမှိုက်တွေကိုရော စနစ်တကျ စွန့်ပစ်နေကြရဲ့လား၊
ကိုယ့်အိမ်က ပစ်လိုက်တဲ့ အမှိုက်ထုပ်ကို သက်ဆိုင်ရာ စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့တွေက လာသိမ်းထုတ်သွားကြပေမယ့် အဲ္လီ့ အမှိုက်ထုပ်တွေဟာ ကမ္ဘာကြီးရဲ့ ဘယ်အရပ်ေ္လသမှာ သွားစုမလဲဆိုတာရော တွေးမိကြရဲ့လား..
အလွယ်တကူ ပစ်လိုက်တဲ့ အမှိုက်တွေကြောင့် ကမ္ဘာကြီး အနံ့အသက်တွေထွက်နေပြီ။
တိုးတက်မှုတွေရဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကြောင့် ကမ္ဘာကြီး ကျန်းမာရေးချို့တဲ့နေပြီ။
ရန်ကုန်တစ်မြို့တည်းရဲ့ အမှိုက်ထွက်တဲ့နှုန်းဟာ တစ်ရက်ကို တန် (၂၅၀ဝ) လောက် ထွက်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ‘ါဟာ ဆင်ကောင်ရေ (၆၄၀) နီးပါးလောက်ရှိပါသတဲ့။ ‘ီလောက်များပြားလှတဲ့ အမှိုက်တွေကို စနစ်တကျမှ စွန့်ပစ်နိုင်ဖို့မလုပ်ဘူးဆိုရင် အနာဂတ်မှာ ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်မလဲ..
အမိုးမလုံတဲ့အိမ်က ဘယ်လိုမှ မလုံခြုံနိုင်ပါဘူး။
နွေးထွေးလုံခြုံတဲ့ အသိုက်အမြုံတစ်ခုရဖို့ဆိုရင် သိပ်နောက်မကျသေးခင်မှာ အမိုးတွေကို ဖာထေးကြဖို့ လိုပါတယ်။
ကမ္ဘာကြီးရဲ့ ကျန်းမာဖို့... ရေရှည် ရပ်တည်နိုင်ဖို့.. သာယာလှပဖို့ တစ်စုံတစ်ယောက်မှာသာ တာဝန်ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်..
လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အကြိုက်ချင်းလည်းမတူနိုင်သလို စိတ်နေစိတ်ထား သဘောသဘာဝချင်းလည်းမတူနိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ လူတစ်ယောက်ချင်းစီဟာ သူတို့ရဲ့ အတွင်းစိတ်သဘောအပေါ်မူတည်ပြီး အကြိုက်တွေကွဲပြားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုတော့ လက်ခံရပါမယ်။ ဒီလိုပဲ အတွင်းစိတ်ရဲ့ လှုံ့ဆော်မှူအပေါ်မှာမူတည်ပြီး အရောင်တွေအပေါ်နှစ်သက်မှူတွေကလည်း ကွဲပြားသွားနိုင်တာမို့ အရောင်တွေဟာ လူတစ်ဦးစီရဲ့ အတွင်းစိတ်ကို ရာခိုင်နှုန်းတစ်ခုအထိ အတော်အသင့်ဖော်ပြနေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို လက်ခံရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ လူတစ်ယောက်ဟာ ဘယ်အရောင်ကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မူတည်ပြီး သူ့ရဲ့စိတ်နေသဘောထားကို အကြမ်းမျဉ်းခန့်မှန်းနိုင်တာမို့ သင်ကိုယ်တိုင် ဒါမှမဟုတ် သင့်ရဲ့ချစ်ခင်သူ၊အသိမိတ်ဆွေတစ်ယောက်ယောက်ကရော ဘယ်လိုစိတ်သဘောမျိုးရှိတယ်ဆိုတာကို သိနိုင်ဖို့အတွက် ဘာအရောင်ကြိုက်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလေးတွေကိုဖြေပြီး စိတ်နေစိတ်ထားလေးတွေကိုခန့်မှန်းကြည့်လိုက်ကြရအောင်။
အဖြူရောင်ဟာ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်မှူသဘောကိုဆောင်တယ်လို့ အတော်များများကအကြမ်းမျဉ်းလက်ခံထားကြပါတယ်။ တကယ်တမ်းတော့ အဖြူရောင်နှစ်သက်သူတွေရဲ့သဘောသဘာဝကအဲဒီထက်ပိုပါတယ်။ အလုပ်တစ်ခုကို အစီအစဉ်တကျလုပ်ဆောင်တတ်ပြီး အချုပ်အနှောင်ကင်းမဲ့တဲ့ လွတ်လပ်ခြင်းကိုနှစ်သက်ပါတယ်။ ပြသနာအရပ်ရပ်ကို အလွယ်တကူကျော်ဖြတ်နိုင်တဲ့ အစွမ်းမျိုးကိုပိုင်ဆိုင်ထားသူတွေပါ။
လွှမ်းမိုးနိုင်စွမ်းနဲ့ ခွန်အားကြီးခြင်းရဲ့ သဘောကိုဆောင်တဲ့ ဒီအရောင်ကိုနှစ်သက်ကြတဲ့သူတွေဟာ တခါတရံမှာတော့ အနုပညာဆန်ပြီး ကိုယ်ချင်းစာစိတ်ပြည့်ဝတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေကိုတော့ တစ်ခြားသူကို တော်ရုံထုတ်ဖော်မပြောတတ်ကြပါဘူး။
အဖြူနဲ့အနက်ကို ရောစပ်လိုက်ရင်ဖြစ်ပေါ်လာမယ့်အရောင်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ခဲရောင်ကို နှစ်သက်ကြသူတွေဟာ အများအားဖြင့် အရမ်းကို စိတ်ထားပြည့်ဝပြီး ယုံကြည်ရတဲ့သူတွေလို့သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်။ အတိုချုပ် ပြောရရင်တော့ ငြိမ်းချမ်းမှူကိုအထူးလိုလားတဲ့သူတွေပါ။
ဆုံးဖြတ်ချက်ပြတ်သားပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ်ကောင်းကောင်းထိန်းကျောင်းနိုင်စွမ်းရှိတဲ့သူတွေပါ။ အမြဲတမ်း တက်ကြွနေပြီး ဖြစ်လာသမျှပြသနာတွေကို ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းဖို့ အသင့်ရှိနေတတ်တဲ့သူမျိုးတွေလို့လည်း သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြုပြင်မှူနဲ့ အားကစားလေ့လာလိုက်စားရတာကို အရမ်းကိုနှစ်သက်တတ်ကြသူတွေပါ။
စိတ်ခံစားချက်နဲ့ ပတ်သက်လို့ လုံခြုံစိတ်ချမှူကိုပေးစွမ်းနိုင်တဲ့အပြင် ရှာမှရှားတဲ့ နှလုံးလှပိုင်ရှင်တွေလို့ဆိုရပါမယ်။လူသားချင်းစာနာစိတ်အပြည့်ရှိပြီး ကူညီဖို့လိုအပ်နေသူတိုင်းကို အကူအညီပေးနိုင်ဖို့ အမြဲအဆင်သင့်ဖြစ်နေတတ်တဲ့လူစားမျိုးပါ။
အချစ်ရဲ့သင်္ကေတလို့ဆိုရမယ့် ဒီအရောင်ကိုနှစ်သက်တဲ့သူတွေဟာ အချစ်နဲ့ပတ်သက်လို့ အရမ်းကိုခံစားချက်ပြင်းထန်သူတွေပါ။ ကိုယ့်ရဲ့လက်တွဲဖော်ဆီက ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းခြင်းဆိုးခြင်းတွေကို လက်ခံပြီး အဆုံးအစမဲ့ချစ်ပေးနိုင်မယ့် စိတ်ကူးယဉ်ဆန်ဆန်အချစ်မျိုးကို အမြဲမျှော်လင့်နေတတ်သူမျိုးတွေပေါ့။
ရှားရှားပါးပါး တော်ရုံလူကြိုက်နည်းတဲ့ ဒီအရောင်ကိုနှစ်သက်ကြသူတွေကတော့ လူတွေနဲ့ရောထွေးနေထိုင်ရတာကိုသဘောကျပြီး အပေါင်းအသင်းဆန့်တဲ့ လူစားမျိုးလို့ဆိုရမှာပါ။ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်က ကိုယ်နဲ့ဆက်နွယ်နေသူတွေဆီက လေးစားမှူနဲ့ ယုံကြည်လက်ခံမှူတွေကို အမြဲလိုလားနေတတ်တဲ့သူမျိုးတွေပါပဲ။
အပြာရောင်ရဲ့ပင်ကိုယ်သဘောတရားအတိုင်းပဲ အေးချမ်းမှူကိုအထူးလိုလားသူတွေဖြစ်ပြီး အမှန်တရားရဲ့ဘက်တော်သားတွေလို့လည်းဆိုနိုင်ပါတယ်။ အမြဲတမ်း တစ်ပါးသူအတွက်နဲ့ သူတို့ရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေအတွက် စဉ်းစားပေးနေတတ်တဲ့လူစားမျိုးတွေပါ။
သဘာဝတရားရဲ့ အရောင်တစ်ခုလို့ဆိုလို့ရတဲ့ အစိမ်းရောင်ကို ချစ်မြတ်နိုးတဲ့သူတွေကတော့ ယုံကြည်စိတ်ချရသလို အရမ်းလည်းပွင့်လင်းတဲ့လူစားမျိုးတွေပါ။ ကိုယ့်ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာတရား ကို အသက်ထက်ပိုပြီးတန်ဖိုးထားတတ်တဲ့သူမျိုးတွေလို့ဆိုရမှာပါပဲ။
ဗဟုသုတအသစ် ၊ပညာရပ်အသစ်တွေကို အမြဲရှာဖွေလေ့လာနေတတ်ပြီး တစ်ခြားသူတွေကို ပြန်လည်မျှဝေပေးရတာကိုနှစ်သက်တတ်တဲ့လူစားမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။ အများနဲ့မတူ တမူထူးခြားစွာရပ်တည်နေရတာမျိုးကိုမှ သဘောကျတဲ့ ဉာဏ်ကြီးရှင်လေးတွေလို့လည်းဆိုရမှာပါ။
မြေဓာတ်သဘောကိုဆောင်တဲ့ဒီအရောင်ကို နှစ်သက်တဲ့သူတွေကတော့ တစ်စုံတစ်ဦးရဲ့ မိတ်ဆွေကောင်းတစ်ယောက်အဖြစ် ကောင်းကောင်းရပ်တည်နိုင်တဲ့စိတ်သဘောထားပိုင်ရှင်တွေဖြစ်ပြီး ယေဘုယျအားဖြင့် တည်ငြိမ် ရိုးရှင်းတဲ့ဘဝမျိုးကိုမှ လိုလားတဲ့သူတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။
အခုလို စီးပွားရေးကျပ်တည်းနေချိန်မှာ လေ့လာထားသင့်တဲ့ ပညာရပ်များ
၂၀၂၀ ဇန်နဝါရီလလောက်ကနေ အခု စက်တင်ဘာလရောက်တဲ့အထိ တစ်ကမ္ဘာလုံးကို ရိုက်ခတ်လာတဲ့ Covid-19 ကပ်ရောဂါကြောင့် အလုပ်အကိုင်တွေလည်းအရင်ကထက်ပိုပြီး ခက်ခဲလာတယ်။ ရပ်ဆိုင်းလိုက်ရတဲ့ လုပ်ငန်းတွေရှိသလို၊ Work From Home နဲ့ရှေ့ဆက်နေရတဲ့ Business တွေလည်း အများကြီးပေါ်ပေါက်လာတယ်။ ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့လည်း အလုပ်တွေရပ်နားထားရတာဖြစ်ဖြစ်၊ အိမ်ကနေပဲ အလုပ်လုပ်နေရတာဖြစ်ဖြစ် အနည်းနဲ့အများတော့ Motivation တွေကျတတ်သလို အလုပ်တွေကလည်း အရင်ကာလတွေလို Productive မဖြစ်တာတွေလည်း ကြုံတွေ့ရပါတယ်။
ဒီလိုဖြစ်လာမှတော့ ဖြစ်လာတဲ့ အခြေအနေကို အတတ်နိုင်ဆုံး အကောင်းဘက်ကနေပဲရှုမြင်ကြည့်ရအောင်။
အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ အိမ်မှာပဲ သင့်ရဲ့ Skill တွေ၊ Knowledge တွေကို တိုးတက်အောင်လေ့လာသင်ယူထားလို့ရပါတယ်။ အိမ်ကနေလည်း ကိုယ်ပိုင် Business တစ်ခုကိုလည်း စတင်ကြည့်လို့ရပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတွေကို ပိုပြီးတောက်ပြောင်အောင်လေ့ကျင့်လို့ရပါတယ်။
အခုလို အလုပ်အကိုင်တွေမသေချာတဲ့ အချိန်မှာ ဒီပညာတွေကို သင်ယူထားရင်သင့်အတွက်နောင်တရစေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ကပ်ကြီးပြီးသွားလို့ အလုပ်အကိုင်တွေပြန်လုပ်ကြတဲ့အခါလည်း ပိုပြီး Productive ဖြစ်တဲ့သူတစ်ယောက် ဖြစ်နေမှာသေချာပါတယ်။
အခုလို Globalization ဖြစ်နေတဲ့ခေတ်ကြီးမှာ မိခင်ဘာသာစကားထက် အခြား Language တွေကို ကျွမ်းကျင်စွာတတ်မြောက်ထားသူဖို့ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေက အများကြီးပိုရှိပါတယ်။ Language က သင်ယူရတာလည်း ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတာမို့ တတ်မြောက်လွယ်ပါတယ်။ အခုလို အိမ်မှာနေနေရင်းနဲ့လည်း Online Language Class တွေကနေတဆင့်သင်ယူ လို့ရပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့လည်း Conversation Group တွေပြုလုပ်ပြီး Join ခြင်းအားဖြင့်သင့် Language Skill ကို အများကြီး Improve ဖြစ်စေပါတယ်။
E-Commerce၊ Digital Marketing အကြောင်းလေ့လာကြည့်ပါ
အပြင်မှာထွက်လုပ်ရတဲ့ အလုပ်တွေနည်းလာတာနဲ့အမျှ Digital/Online Business တွေအများကြီး ထောင်တက်လာတယ်။ Business Operation တွေ၊ Trading လုပ်တာတွေအားလုံးကို Digital Platform နဲ့သွားကြတာမို့ သင့်အနေနဲ့လည်း တစ်နိုင်တစ်ပိုင် Online Business ကို စတင်ကြည့်လို့ရပါတယ်။ E-Commerce၊ Digital Marketing အကြောင်းကို နှံ့နှံံ့စပ်စပ်လေ့လာထားခြင်းဖြင့် သင့်လုပ်ငန်းအတွက်ဘာတွေလိုအပ်လဲ၊ Customer တွေရရှိအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ Tactics တွေကိုပါသိလာလိမ့်မယ်။
Blog တွေ၊ Vlog တွေစလုပ်ကြည့်ပါ
တကယ်လို့ သင့်က ဖက်ရှင်၊ အလှအပနဲ့ Lifestyle တွေကို အများသိအောင်ချပြရတာကြိုက်တယ်၊ လူတွေကို Knowledge Sharing လုပ်ရတာ နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ အခုခေတ်စားနေတဲ့ Influencer/Vlogging Industry ကိုလည်းခြေဆန့်ကြည့်လို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သင်လုပ်မယ့် Field မှာတော့ ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်အောင် သိရှိထားဖို့ိလိုသလို အများနဲ့မတူတဲ့ ဆန်းသစ်တည်ထွင်မှုလည်းရှိရပါလိမ့်မယ်။ သင် Talent ရှိရင်ရှိသလောက် တက်လမ်းရှိတဲ့ အလုပ်တစ်ခုပါပဲ။
ဝါသနာပါတဲ့ Art တစ်ခုခုကို သင်ယူပါ
Art ဆိုတာပန်းချီဆွဲတာတစ်ခုတည်းကို ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ်ဝါသနာပါတဲ့ အနုပညာအတတ်ပညာလေးတွေ ဘယ်ပညာကို မဆိုအချိန်လေးနည်းနည်းပေးပြီး လေ့လာကြည့်ပါ။ Bakery လုပ်တာဖြစ်ဖြစ်၊ Handmade Craft ပစ္စည်းလေးတွေလုပ်တာဖြစ်ဖြစ်၊ ပန်းအလှဆင်တာလေးတွေဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။ လေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေအရ ဒီလို Art Work လေးတွေကိုလုပ်လေ့ရှိတဲသူက လုပ်ငန်းခွင်မှာအလုပ်လုပ်တဲ့အခါ ပိုလည်း Creative ဖြစ်တယ်။ အကောင်းမြင်တဲ့စိတ်ရှိပြီး အများနဲ့မတူအောင် Out-of-the-Box စဉ်းစားနိုင်ပါတယ်။
Technical Skills တွေကို Youtube ကနေသင်ယူပါ
သင့်ရဲ့ လက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်မှာ အသုံးဝင်တဲ့ Technical Skill တွေ၊ ဥပမာ. Photoshop၊ Video Editing၊ Coding စတဲ့ ပညာရပ်တွေအားလုံးကို Youtube မှာသင်ယူလို့ရပါတယ်။ Website တွေမှာလည်း Free Online Course တွေရှိသလို Youtube ကနေလည်း Tutorial Video တွေကို Episode လိုက်သင်ယူလေ့လာလို့ရပါတယ်။ ဒီလို Course တွေက သင့်ကိုလည်းအလုပ်မှာပို ကျွမ်းကျင်စေသလို ပိုလည်း Professional ဆန်နေစေမှာပါ။
စာအုပ်တွေထက် ပိုပြီးကောင်းတဲ့ Knowledge Source ဆိုတာရှိဦးမှာလား။ စာဖတ်တဲ့အခါ သုတရော၊ ရသကိုပါ စုံအောင်ဖတ်ပါ။ သုတစာပေတွေက သင့်ရဲ့ Intelligence Quotient ကိုတိုးတက်ပြီး အသိပညာတွေကြွယ်ဝစေသလို၊ ရသစာပေတွေကကျတော့ သင့်ရဲ့စိတ်ခံစားမှုပိုင်းဆိုင်ရာ Emotional Quotient (EQ) ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီး သင့်ရဲ့တွေးခေါ်ပုံတွေကိုပါရင့်ကျက် တိုးတက်စေပါတယ်။ အလုပ်သွားတဲ့ကာလတုန်းက စာဖတ်ဖို့အချိန်မရှိဘူးဆိုတဲ့ သင့်ရဲ့ဆင်ခြေတွေကို ခေါင်းထဲကထုတ်လိုက်ပါတော့။
မိမိကိုယ်ကို အားမလိုအားမရမှူ ၊အလိုမကျမှူတွေနဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေ အောက်ဆုံးရောက်နေရတဲ့ အခြေအနေမျိုးတွေကို အားလုံး အနည်းနဲ့အများဖြတ်ကျော်ဖူးကြမှာပါ။ ငါက အသုံးမကျဘူး ဘာလုပ်လုပ်အဆင်မပြေဘူး အရမ်းညံ့တဲ့သူတစ်ယောက် ဆိုတဲ့အတွေးမျိုးတွေနဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်အမြဲတမ်းလှောင်ပိတ်မခံပါနဲ့။ ကိုယ့်ရဲ့ ပျော်ရွှင်မှူတွေပျောက်ဆုံးလာတာနဲ့အမျှ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှူပါပျောက်ဆုံးလာပြီး နောက်ဆုံးကိုယ်ပါပျောက်ဆုံးသွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပိုပြီးချစ်တတ်လာအောင်ကြိုးစားပါ။ ပျော်အောင်ထားပါ။ စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ချစ်ခြင်းနဲ့ အကောင်းမြင်စိတ်ဟာ တစ်နည်းတစ်ဖုံအားဖြင့်အရေးပါသလို အခက်အခဲတွေကို အလွယ်တကူကျော်ဖြတ်ရာမှာလည်းအသုံးဝင်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေနဲ့ ချစ်ကြမလဲ ၊ ဘယ်လိုပျော်အောင်ထားကြမလဲဆိုတာကို အောက်ကအချက်လေးတွေမှာ လေ့လာကြည့်လိုက်ရအောင်။
အကောင်းမြင်စိတ်ကို နေ့တိုင်းမွေးပါ။ နေ့စဉ်မနက်တိုင်း ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်က ကောင်းတဲ့အရာတွေကို အနည်းဆုံး ဆယ်ခုလောက်အထိ ချရေးတဲ့ အလေ့အကျင့်မျိုးလုပ်ပါ။ ကောင်းသောအကြောင်းအရာတွေနဲ့စတင်ထားတဲ့မနက်ခင်းတိုင်းဟာ ဘယ်လောက်ပဲ ဆိုးဝါးတဲ့အရာတွေကိုကြုံတွေ့နေရပါစေ ကြံ့ကြံ့ခံ အားတင်းနိုင်တဲ့ စိတ်ဓာတ်မျိုးကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ဥပမာ - ငါကတော်တယ်၊ ငါကသန်မာတယ်၊ ငါကအရမ်းကြည့်ကောင်းတယ်၊ ငါ့မိဘကငါ့ကိုချစ်တယ်၊ ငါ့မှာသူငယ်ချင်းကောင်းတချို့ရှိတယ်၊အိမ်နီးချင်းတွေကအရမ်းစိတ်ကောင်းရှိတယ် စသဖြင့်ပေါ့။
ကိုယ့်ကိုကိုယ်အမှန်တကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင် ကိုယ်ကြိုက်တာကိုယ်လုပ်ဖို့ နောက်မတွန့်ပါနဲ့။ ဥပမာ တချို့ကခရီးတွေသွားရတာကြိုက်တယ်။တောင်တန်းတွေ သဘာဝတရားတွေဆီကို ခရီးနှင်ရတာမျိုး ၊ Hiking တွေလုပ်ရတာမျိုး ၊ လွတ်လပ်ပေါ့ပါးပြီး စွန့်စားရတဲ့ အရသာမျိုးကို သဘောကျကြတယ်။ ဒါဟာ အသက်အရွယ်တစ်ခုကိုရောက်လာလို့ ဒီအလုပ်မျိုးတွေကို မလုပ်နိုင်တော့တဲ့အချိန်မျိုးမှာ အရမ်းကို အမှတ်တရဖြစ်စရာ Memories တွေအဖြစ်ကျန်ရှိနေမှာမို့လို့ ကိုယ် သဘောကျတာကို မလုပ်ခဲ့ရလို့ ရမယ့်နောင်တတွေထက် ကိုယ်သဘောကျတာကို လုပ်ခဲ့ဖူးတဲ့အမှတ်တရတွေအဖြစ်သာကျန်ရှိစေပါ။
လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ပုံပန်းသွင်ပြင် အမူအကျင့် လည်းမတူသလို မွေးဖွားလာတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေခြင်းလည်းမတူတာမို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်တခြားသူတစ်ယောက်နဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ်စိတ်ညစ်ခံတာမျိုးကိုရှောင်ပါ။သူတစ်ပါးနဲ့နှိုင်းယှဉ်တယ်ဆိုတာ ကိုယ့်ကိုကိုယ် အကြီးမားဆုံး ညှင်းပန်းမှူတစ်ခုပါပဲ။ “ငါကသူ့လိုမလှဘူး”ဆိုတဲ့ အတွေးမျိုးထက် “ငါ့ပုံစံနဲ့ငါ သူများနဲ့မတူပဲ ဘယ်လိုလှအောင်လုပ်လို့ရလဲ” ဆိုတဲ့ အဖြေကိုရှာပါ။
4.ကိုယ့်ကိုကိုယ် Date လုပ်ပါ
ကိုယ့်ကိုကိုယ် တတ်နိုင်သမျှ ဂရုစိုက်ဖို့လိုပါတယ်။ဘယ်သူမပါပဲ တစ်ယောက်တည်း အပြင်လျှောက်လည်တာမျိုး ၊တစ်ယောက်တည်း ခရီးတွေသွားတာမျိုးနဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပိုပြီးချစ်တတ်လာအောင်ကြိုးစားပါ။ တစ်ခါတစ်လေတော့ အထီးကျန်သလိုလို ခပ်ကြောင်ကြောင်နိုင်သလို ခံစားရနိုင်ပေမယ့် တစ်ယောက်တည်းသွားပါများလာတဲ့အခါ တစ်ယောက်တည်းနေရတဲ့အရသာကို ပိုသဘောကျနှစ်သက်လာပါလိမ့်မယ်။ ငွေကုန်ကြေးကျအနည်းဆုံး ကိုယ့်ကိုကိုယ် date လုပ်နည်းတွေကတော့ တစ်ယောက်တည်း ရုပ်ရှင်သွားကြည့်တာမျိုး၊ မုန့်သွားစားတာမျိုး၊ ကမ်းခြေတွေသွားတာမျိုး နဲ့ စက်ဘီးလျှောက်စီးတာမျိုးတွေပါပဲ။
5. ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဆုချပါ
ခက်ခဲတဲ့အရာတစ်ခု ၊ ကိစ္စကြီးကြီးတစ်ခု အောင်အောင်မြင်မြင်ပြီးဆုံးသွားတိုင်း ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဆုချတဲ့အလေ့အကျင့်မျိုး ပြုလုပ်ပါ။ အခက်အခဲ ကြီးသည်ဖြစ်စေ ငယ်သည်ဖြစ်စေ အောင်အောင်မြင်မြင်ကျော်ဖြတ်နိုင်တဲ့အခါမျိုးမှာ ကိုယ့်ကိုကိုယ်အားပေးချီးမွမ်းတတ်ရပါမယ်။ အားပေးမယ့်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်မှမရှိရင်တောင် ကိုယ့်ကိုကိုယ်အားပေးချီးမြှောက်ဂုဏ်ယူတတ်တဲ့စိတ်ကို မွေးမြူပါ။ ကိုယ်ကသာ ကိုယ့်ဘဝအတွက် သစ္စာအရှိဆုံး Fan တစ်ယောက်ပါပဲ။